अप्रिल मा युरोप यात्रा समयमा वसन्त समय अर्थ युरोप यात्रा! Since most of Europe is so far from the equator, अधिकजसो प्रसिद्ध शहर अझै पनि अप्रिल मा एक बिट खुर्सानी छन् (तदनुसार प्याक). अझै पनि, अप्रिल मा युरोप यात्रा भ्रमण गर्न वर्ष को सबै भन्दा राम्रो महिना को एक हुन सक्छ व्यस्त र सबै भन्दा लोकप्रिय शहर यहाँ. तापमान रमाइलो लागि पर्याप्त न्यानो छन् पर्यटन, अझै भीड आकार तपाईं मई र जुन मा सुरु देख्ने भन्दा धेरै साना हुन्छन्. यहाँ वसन्त समयमा आफ्नो युरोप यात्रा मा जानुहोस् ठाउँहरू हाम्रो सूची छ!
यो चित्र वसन्त समयमा युरोप यात्रा मा लगियो, तस्वीर शान्तिपूर्ण लेकसाइड गाउँमा र को तलहटी विरुद्ध सेट गहिरो नीलो पानी आल्प्स, जहाँ हिउँ capped चोटियों enchanting Borromeo द्वीप एक नाटकीय पृष्ठभूमि गठन; beguiling नाइस, जहाँ गहिरो पानी मा पहाड प्रवेश र सुरम्य गाउँमा भएको ढलान अपनाउँछन्. दृश्य यी किसिमका एक तलतिर कुकुर स्थिति मा गुना तपाईं कविता लेख्न वा spontaneously गर्न प्रेरित गर्न प्रकारको हो. यो सिर्फ यति आश्चर्यजनक शान्तिपूर्ण छ!
अप्रिल मा क्षेत्र भ्रमण, भाग रूपमा वसन्त अन्तरदृष्टि मार्गदर्शक Enchanting इटालियन पोखरी यात्रा to stay ahead of the crowds.
वसन्त को शुरुवात मनाउन र बार्सिलोना एक रेल समातेर. यो स्पेनी व्यक्तिसँग यो स्पेनी शहर मा प्रेम पर्नु गर्न धेरै लिन छैन, जो सधैं आराम र एक दैनिक Siesta लिन सम्झना – खाजा समय पछि द्रुत झपकी, सेतो मा आराम गर्दा समुद्र तट, खाने स्वादिष्ट paella, र ताजा Sangria पिउने.
को केटालोनिआ क्षेत्रमा झूट, सीधा स्पेनका पूर्वोत्तर भू-मध्य तट मा, बार्सिलोना मा दोस्रो ठूलो शहर हो स्पेन, र सबै भन्दा प्रसिद्ध को एक गन्तव्यहरू वसन्त समयमा युरोप यात्रा गर्न यात्री लागि. बार्सिलोना अविश्वसनीय पुरानो वास्तु रत्न र आधुनिक डिजाइन को एक रोचक क्रसओभर छ. तपाईं Gaudí वास्तुकला को एक ठूलो प्रशंसक हुनुहुन्छ भने, को alluring Sagrada Família हेर्नका लागि यहाँ आउन, कासा Batllo, र Güell पार्क. बार्सिलोना सामान्यतया सबै वर्ष दौर न्यानो छ, र तपाईं यस भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ पर्यटक मैत्री वर्ष को कुनै पनि समय शहर.
तपाईं ब्रुग्स थाहा हुन सक्छ, बेल्जियम, उच्चारण छ “broozh,” तर धेरै, को र नायक “ब्रुग्स मा” चलचित्र, पक्कै छैन. तिनीहरूले डबलिन हिट मानिसहरू छन्, एक हिट धेरै गलत जान्छ पछि दुई हप्ता आफ्नो मालिक द्वारा त्यहाँ पठाइएको. एक जवान क्रोधी कहीं तर डबलिन हुन कुनै कारण देख्नुहुन्छ गर्ने छ; अन्य, पुरानो, gentler, थप उत्सुक, एक मार्ग देखाउने पूस्तक र घोषणा किन्छ: “ब्रुग्स बेल्जियम मा सबै भन्दा राम्रो संरक्षित मध्ययुगीन शहर हो!”
त्यसैले यसलाई पक्कै देखिन्छ. चलचित्र अरू केही पूरा भने, यो ब्रुग्स भ्रमण गर्न धेरै एक जरुरी इच्छा मा प्रेरित.
प्रयोग एक दुई एक लागि विशेष वर्ष राउन्ड छ! फ्रान्स र स्पेन बीच झूट, सानो शहर साथै लागि ज्ञात बलियो प्रभाव दुई शहर ल्याउन, बदनाम culminating बियर र चकलेट. संगै पेरिस, प्राग, र बुडापेस्ट, यो सबैभन्दा धेरै छ रोमान्टिक नहरहरुमा पूर्ण युरोप मा शहर र पुरानो मध्ययुगीन घरहरू.
यो 2,000 वर्ष पुरानो शहर पश्चिमी मा स्थित छ जर्मनी र क्षेत्र मुख्य सांस्कृतिक केन्द्र हो. मध्ययुगीन cathedrals संग र मनोरम नदी दृश्य, कोलोन एक कामवासना योग्य गन्तव्य हो. जो चाहनुहुन्छ ती नयाँ संस्कृति मा सरल विशेष गरी र अनुभव जीवन गर्दा एक नयाँ तरिका युरोप मा यात्रा. आफ्नो क्यामेरा भूल Donot! कोलोन खुला दिमाग शहर हो. यो शायद रूपमा अन्य शहर जस्तै पहिलो नजर मा सुन्दर छ, तर जब तपाईं वरिपरि हिंड्न, यो निश्चित वसन्त समयमा युरोप यात्रा को लागि हाम्रो सूची मा जर्मनी मा Nicest शहर मध्ये एक छ कि र तपाईं देख्ने.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/europe-travel-during-spring/ - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल) जर्मनी
#AprilTravel #EuropeinApril #traveleurope europetravel eurotrip वसन्त रेल यात्रा travelcologne